Somaliska Online Skolan | Faahfaahin
Ku soo dhawaada Somaliska Online Skolan oo ay idin soo gudbisay xarunta New Progress Center ee ku taala magaalada Fagersta. Iskuulkaan waa mid Online oo aah ka qaadan karto koorsooyin hore loo soo diyaariyay oo kala ah Aasaaska Luuqada Swedishka.
Faa’iidooyinka iskuulkaan ayaa ah
in aad adiga oo gurigaaga jooga aad qaadan karto casharada waqtiga kugu haboon.
Meelkasta oo aad Sweden ka joogto in aad ku soo biiri karto, waxa keliya ee aad u baahantahay waa kombutar.
Casharadu waxay ku diyaarsanyihiin Af-Soomaali.
Haddii su’aalo aad qabto ayaad isla casharka hoostiisa ku qori kartaa adigoo uu kaaga soo jawaabayo macalinka.
Xarunta NPC waa goob sharciyaysan oo canshuurta bixisa.
Iskuulkaan ma ahan mid waqti gooni ah leh, adiga waqtiga kugu haboon ayaad casharada qaadan kartaa. 24 saac waa online oo guriga iyo meelkasta oo aad joogto ayaad ka soo gali kartaa.
Goorma ayaa la bixinayaa lacagta?
Lacagta waxaad bixineysaa bil bil, adiga ayay kugu xirantahay inta bilood aad qaadaneyso. Markii aad 1 bil dalbato oo ay kaa dhamaato akoonkaaga waa uu isxirayaa. Waxaad ka dibna soo dirsan kartaa bil kale ama dhowr bilood sidii aad jeceshahay.
Casharada ma la koobiyeysan karaa?
Maya, taasi waa mamnuuc in casharada la koobiyeysto ama dad kale loo gudbiyo. Akoonkaaga waxa uu qaas u yahay adiga oo keliya, waa mamnuuc in qof kale aad siiso. Maamulka bogga wey ogaanayaan haddii qof kale uu isticmaalayo akoonkaaga. Haddii ay dhacdo arintaas waan xireynaa akoonkaas.
Sideen ku galayaa bogga iskuulka?
Markii aad dhiibto lacagta iskuulka oo ay ku soo dhacdo akoonkeena ayaan moobeelka aad diiwaangashatay waxaan kuugu soo direynaa KOD 4 nambar ah oo aad ku qori karto sanduuqa dhinaca bidix ku yaala. Marka aad ku qorto Kodka oo aad Logga in riixdo ayaad si toos ah u arki doontaa casharada. Waxaa muhiim ah marka aad isdiiwaan galineyso in aad soo raaciso moobeelkaaga.
Sideen ku dhiibi karaa lacagta iskuulka?
Lacagta iskuulka waxaad u dhiibi kartaa sida caadiga ah ee loo dhiibo lacagta kirada kuriga iyo korontada. Bangigaaga internetka aad galeysaa ka dibna waxaad lacagta ku soo direysaa akoonkeena Bankgiro: 769-9564 ama Swedbank: 84244,9238270483. OCR meesha ay ku qorantahay waa in aad ku qortaa moobeelkaaga.
Somaliska Online Skolan © 2013. All Rights Reserved.